IWCA Dissertation Grant - Yepasi Pose Kunyorera Nzvimbo Association
Pagore muna Kubvumbi 15.
Sangano reInternational Writing Centers Association (IWCA) rinoshanda kusimbisa nzvimbo yekunyorera nharaunda kuburikidza nezviitwa zvacho zvese. Sangano rinopa IWCA Dissertation Research Grant kutsigira vadzidzi vezvechiremba sezvavanoshanda pakunyora zvinyorwa zvine chekuita nepakati. Chipo ichi chinoitirwa kubhadhara mari dzinowanikwa nenhengo dzevadzidzi dzechiremba avo vari kushanda kuti vapedze dhipatimendi uye degree rekurapa. Mari idzi dzinogona kushandiswa pamitengo yekugara; zvigadzirwa, zvishandiso, uye software; kufamba kunzvimbo dzekutsvagisa, kuendesa kutsvagurudza, kana kuenda kumisangano kana masangano anoenderana nebasa iri; uye zvimwe zvinangwa zvisina kufukidzwa pano asi kutsigira dissertating akapedza kudzidza mudzidzi. Vadzidzi vezvechiremba vane tarisiro yakatenderwa uye vari pane chero nhanho yekutsvaga / kunyora kupfuura iyo prospectus vanokurudzirwa kunyorera.
Gamuchira vanogashira vanogashira $ 5000 cheki kubva kuIWCA pavanosarudzwa semuhwina mubairo.
Iko kunyorera kunofanirwa kuendeswa neinodiwa nguva yekupedzisira kuburikidza ne IWCA Nhengo Portal. Zadzisa mapakeji ekushandisa anove nezvinhu zvinotevera mune imwe pdf faira:
Tsamba yekuvhavha yakanyorerwa kune aripo sachigaro sachigaro anotengesa komiti pane zvakawiriranwa mabhenefiti anozobva mukutsigirwa nemari. Zvikurukuru, tsamba inofanira kuita zvinotevera:
Kumbira kufunga kweIWCA kwechikumbiro
Zivisa iye anenge achinyorera uye chirongwa
Sanganisira humbowo hweInstitutional Research Board (IRB) kana imwe yemitemo yebhodhi mvumo. Kana iwe usina kubatana nesangano rakadai seyakaitwa, ndapota svika kune iyo Grants uye Awards Sachigaro kuti utungamirirwe.
Rondedzera zvirongwa zvekupedzisa chirongwa
Tsamba mbiri dzereferenzi: Imwe kubva kuna dissertion director uye imwe kubva kune wechipiri nhengo yedare redhisheni.
Bvuma IWCA rutsigiro mune chero mharidzo kana kuburitswa kwezvakabuda mukutsvaga kwekutsvaga
Tungamira kumberi kuIWCA, mukutarisira Sachigaro weKomiti yeGrant, makopi ezvinyorwa zvinoguma kana mharidzo
Faira gwaro rekufambira mberi neICA, mukutarisira Sachigaro weKomiti yeGrant, zvichikosha mukati memwedzi gumi nemiviri yekugamuchira mari yemubhadharo.
Paunenge wapedza chirongwa, tumira wekupedzisira mushumo weprojekiti uye PDF yedhipatimendi rakapedzwa kuIWCA Board, iri kutarisira Sachigaro weKomiti yeGrant
Zvakasimba funga kuendesa chinyorwa kubva pane yakatsigirwa tsvagiridzo kune imwe yeIWCA yakabatana zvinyorwa: Chinyorwa Chekunyora Chinyorwa, kana kuti Kuongorora kwevezera rako. Iva nechido chekushanda pamwe nemupepeti (s) uye muongorori (s) kugadzirisa bhuku racho kuti rive nyore kuburitswa
2021: Yuka Matsutani, "Kuyananisa Mukaha Pakati Pedzidziso uye Kudzidzira: Kukurukurirana Analytic Kudzidza KweMitemo Yekudyidzana uye Tutoring Maitiro paYunivhesiti Kunyora Center"
2020: Jing zhang, "Kutaura Nezve Kunyora muChina: Nzvimbo Dzokunyora Dzinobatsira Sei Zvinodiwa zveVadzidzi veChinese?"
2019: Lisa Bell, "Kudzidzisa Varairidzi kune Scaffold neVanyori veL2: Chiito Chekutsvaga Kunyorera Center Project"
2018: Lara Hauer, "Translingual Approach to Tutoring Mitauro Vanyori muKoreji Kunyorera Nzvimbo" uye Jessica Newman, "Nzvimbo Iri Pakati: Kuteerera Nemusiyano Munharaunda uye Yunivhesiti Kunyorera Center Zvirongwa"
2017: Katrina Bell, "Mudzidzisi, Mudzidzisi, Scholar, Administrator: Pfungwa dzeZvezvino neAlumni Vakapedza Kudzidza"